Qaado tijaabo aqooneed! Maxaad ka taqaanaa faraqa u dhexeeya takhasuska waxbarashada guud iyo waxbrashada xirfadda?
Baro qaab dhismeedka!
Middee ayaad u malaynaysaa inay kugu habboon tahay?
Akhri sharraaxadaha! shaki la’aan waxaad baran kartaa wax cusub? Fasalka 10-aad
Barashada waxbarashada guud ku hagtaa caddeynta ogolaanshaha jaamicadda
Tacliinta sare ee heerka 1 ee dugsiga
Tacliinta sare ee heerka 2 ee dugsigal
Tacliinta sare ee heerka 3 ee dugsiga
Tacliinta sare ee lagu qaato kulliyadaha/jaamicadaha
Barnaamijka saa’idka ah ee caddeynta ogolaanshaha jaamicadda guud
Waxbarasho xirfadeed waxay ku hagtaa Ahmiyadda xirfadda (leh ama aan lahayn ganacsi ama shahaaddada safarka ninka)
Shaqo ku tababarid ah tababar aasaasid ah
Xirfad cilmiyeed iyo shaqaalayn ama waxbarasho xirfadeed
Waxaad heli tababar ah sida aad ugu laylmi karto xirfad oo aad si toos ah u tagtid shaqada nolosha
Marka aad dhammaysatid kuna baastid waxbarashada xirfadda iyo tababarka, waxaad leedahay cilmi xirfad ah. kadibna waxaad yeelan darajo, sida "koronta yaqaan" ama "farsamo yaqaan farmasi". Xirfadaha ka sarreeya waxbarashada dugsiga sare iyo tababarradu waxay dhan yihiin qiyaastii 200 oo xirfado kala duwan ah.
Waxaa jiro noocyo badan "maadooyinka akhriska"
Gudaha barnaamijyadda waxbarashada guud, maadooyinka badankoodu waa kuwo caadi ah "akhris" maadooyin, sida afka-noorwiijiyaanka, xisaabta, cilmiga bulshada, sayniska dabiiciga ah iyo afafka ajnabiga ah.
Waxaad noqon kartaa shaqo ku tababarte aadna ka heshid qaybta ugu danbaysa ee tababarkaaga shirkad ganacsi
Inta badan barnaamijyada waxbarashada xirfadda, qaar kamid ah waxbarashada iyo tababarka waxaa lagu bixiyay gudaha tababar la aasaasay. Uguna badan ganacsiga sharciga ah, labada sano ee u horraysa waxbarashada waxaa lagu qaadanayaa gudaha dugsi. Midan waxaa xigi doona labo sano oo shaqo ku tababar ah oo lagu bixinayo shirkad ganacsi dhexdeeda.
Waa suurto gal in la helo lacag bixin muddada lagu jiro tababarka
Barnaamijka waxbarashada xirfadda wuxuu bixiyaa fursad waxbarasho iyo tababar ah oo ah tababar la aasaasay. Tar-tamayaasha tababarka iyo shaqo-ku-tababarista lacag ayaa kubaxaysa in badan oo ah ganacsi illaa ganacsi.
Waxay kuu diyaarinaysaa waxbarasho saa"id ah oo ah kuliyad jaamicad ah ama jaamicad
Ma doonaysaa inaad qaadato waxbarasho aad ka baratid jaamicad ama kulliyad jaamicadeed kadib waxbarashada dugsiga sare iyo tababarka? Haddii aad dooratid barnaamij waxbarasho oo ah waxbarashada guud, waxaad heli doontaa helitaanka ugu wanaagsan si aad sidaa u samayso.
Waxaad dooran kartaa inaad qaadato sanad saa"id ah oo ku siinaysa shahaadada guud ee ogolaanshaha jaamicadda
Dhammaan barnaamijyada waxbarasho ee waxbarashada guud waxaybixiyaan caddeyn ogolaansho jaamicad guud ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaad sidoo kale heli kartaa caddeyn ogolaansho jaamicadeed oo ah barnaamijyada waxbarasho ee xirfadda ah. Marxaladdan waxaa qasab kugu ah inaad qaadato hal sano oo waxbarasho saa"id ah marka aad doonayso caddeynta ogolaanshaha jaamicadda guud. (Qaar kamid ah kulliyadaha jaamicadeed iyo jaamicaddaha sidoo kale waxay bixiyaan koorsooyin ama "Y adeeg ku tababarid", kaasoo kuwa soo qaatay waxbarashada xirfadda iyo tababarka siinaysa cunto iyo wixii lamid ah, aanan lahayna caddeymo ogolaansho jaamicadeed.)
Waxaad haysataa fursad ah inaad doorato maadooyinka shuruudaha ogolaanshaha barashada barnaamijyada sayniska
Qaar kamid ah barnaamijyada waxbarasho, ee injineeriyadda, sayniska iyo caafimaadka, waxaa lagaaga baahan yahay inaad haysato maadooyin saynis ah. Haddii aad doorato Vg2 iyo Vg3 oo leh saynis dabiici ah iyo xisaab, waxaad yeelan doontaa fursad aad ku doorato dhammaan maadooyinka sayniska ah ee aad u baahan tahay. Midani aad bay u adag tahay in lagu helo aaggaga barnaamij kale.
Waxaad heli doontaa waayo aragnimo shaqo oo ficil ah muddada aad ku jirtid tababarka
Barnaamijyada waxbarashada xirfadda waxaad mudan tahay inaad hesho tababar ficil ah gudaha dugsiga iyo adeeg ku tababarid gudaha tababarrada la aasaasay labadaba.
Ogolaansho ah waxbarashado siyaado ah oo laga helo kuliyadda waxbrashada tacliinta sare
Waxbarashada xirfadda tacliinta sare waa mid kooban iyo koorso waxbarashada xirfadda oo dheeraad ah oo loogu talo galay kuwa soo qaatay waxbarashada xirfadda iyo tababarka.
Hadda waxaad inyar ka taqaana faraqa u dhexeeya waxbarashada xirfadda iyo takhasusyada waxbrashada guud. Shaki la’aan waxaad dareemaysaa waxa ku saabsan waxa adiga kuu qalma? Waxaa jira 5 barnaamij oo waxbarashada guud ah iyo 8 barnaamij oo waxbarasho xirfad ah oo aad kala dooran karto.
Barnaamijkee waxbarasho ayaa kugu habboon?